Su'aalaha La Weydiiyo - HANGZHOU LINAN HUASHENG MAALMAHA LOO BAAHAN YAHAY CO., LTD
Waxaan nahay warshad, ma ahan shirkad qeybisa ama shirkad ganacsi, sidaas darteed qiimaha waa inuu noqdaa mid aad uga jaban oo tartan leh.
Xitaa waxaan ka mid nahay kuwa haysta alaabta alaabta ceyriinka ah, sidaa darteed waan xakameyn karnaa tayada bilowga ugu horeeya sicirkuna waa tartan.
Haa, waxaan leenahay shuruudaha MOQ haddii macaamiisha ay u baahan yihiin shey la adeegsaday ama xirmo.
Ama waxaad dooran kartaa inaad iibsato bacda xirmooyinka MOQ ama sanduuqyada, ka dib waxaan qabannaa dhowr shixnad. waxaan ku keydin karnaa boorsooyin la qaabeeyey oo madhan ama sanduuqyo ku jira bakhaarkeenna si amarkaaga xiga loo helo.
Haa, waxaan ku bixin karnaa dukumiintiyada badankood oo ay ku jiraan Shahaadooyinka Asalka; Caymis; MSDS, iyo dukumiintiyada kale ee dhoofinta halka looga baahdo.
Shaybaarrada, waqtiga hoggaamintu waa ilaa 7 maalmood. Soosaarka ballaaran, waqtiga hogaamintu waa 20-25 maalmood kadib helitaanka lacagta deebaajiga. Waqtiyada hogaamintu waxay dhaqan galayaan markii (1) aan helnay deebaajigaagii, iyo (2) aan helno ogolaanshahaagii ugu dambeeyay ee alaabadaada. Haddii waqtiyadayada hogaamintu aysan la shaqeynin waqtigaaga ugu dambeeya, fadlan ka gudub shuruudahaaga iibkaaga. Xaaladaha oo dhan waxaan isku dayi doonnaa inaan la jaanqaadno baahiyahaaga. Xaaladaha badankood waan awoodnaa inaan sidaas yeelno.
Debaaji 50% ka hor, 50% dheelitir ka dhan ah nuqulka B / L.